Yintoni iBluetooth kwifowuni yethu ye-Android | I-Androidsis
I-Bluetooth yitekhnoloji esele ikho ixesha elide. Kukwakhona kwiifowuni zethu ze-Android. Uninzi lwabasebenzisi luyazi ngakumbi okanye ngaphantsi ukuba yintoni le nkqubo yonxibelelwano ngaphandle kwamacingo, evumela unxibelelwano olungcono phakathi kwezixhobo. Kukuthini ukuba nakho ukutshintshiselana ngeefayile, phakathi kweminye imisebenzi.
Kukho ezinye izinto zeBluetooth ezaziwa ngabathengi abaninzi. Kodwa abaninzi abayazi ncam into enokwenzeka ukuyenza ngayo. Ke ngoko, ngezantsi siza kukuxelela yonke into esinokuyenza ngale teknoloji kwifowuni yethu ye-Android.
1 Uyisebenzisa kanjani iBluetooth kwi-Android
2 Unxibelelwano phakathi kwezixhobo
3 Umsindo kunye nokuzonwabisa
4 Sebenzisa emotweni
Uyisebenzisa kanjani iBluetooth kwi-Android
Uninzi lwabasebenzisi mhlawumbi sele besazi ukuba le teknoloji isetyenziswa njani kwizixhobo zabo ze-Android. Nangona, ngokuxhomekeke kuhlobo lwenkqubo oyisebenzisayo, inokwahluka. Kodwa, njengoko sikubonisa apha ngezantsi, sinokufumana okuninzi ngeBluetooth kwifowuni yethu. Indlela yokwenza kusebenze kulula, kuba Kwiifowuni ezininzi sinethuba lokuyenza kwipaneli yesaziso. Ke akukho mfihlakalo ininzi kule meko.
Ukuba sifuna ukudibanisa umnxeba nomnye, senza iBluetooth isebenze kuqala. Singayenza kwipaneli yesaziso, nangona kunokwenzeka kuseto. Ukuba une-Android 7.0 okanye iinguqulelo zangaphambili, icandelo ekubhekiswa kulo libizwa ngokuba yi "Wireless kunye neenethiwekhi" kwaye iinguqulelo ezintsha kuya kufuneka zikhangele icandelo elibizwa ngokuba "zizixhobo ezixhunyiwe."
Ngaphakathi sinokubona ukuyenza isebenze kwaye sibone ukuba zeziphi ezinye izixhobo eziqhagamshelwe kufutshane nathi.
Unxibelelwano phakathi kwezixhobo
Yeyona nto ibaluleke kakhulu yokusebenzisa iBluetooth ixesha elide. Into ethe yayisebenzisa kakhulu ngamanye amaxesha. Ndiyabulela kule teknoloji sinokunxibelelana nesinye isixhoboNokuba yeyiphi enye ifowuni ephathekayo, i-Android okanye i-iOS, okanye izixhobo ezinje ngeentsimbi okanye iwotshi efanelekileyo. Ngale ndlela, kunokwenzeka ukuhambisa iifayile phakathi kwezixhobo okanye ukungqamanisa idatha phakathi kwabo.
Yindlela elula yokuqhagamshela izixhobo. Kwiminyaka eyadlulayo, iBluetooth yindlela abasebenzisi ababenokuzithumela ngayo iifayile kwifowuni enye iye kwenye. Kwakuqhelekile ukuba iifoto okanye ukuncenceza kuthunyelwe kusetyenziswa le teknoloji. Into ephulukene nobunzima ngokuhamba kwexesha.
Umsindo kunye nokuzonwabisa
I-Meizu EP-52 yeBhloko yeBluetooth
Enye yezona zinto zisetyenziswayo namhlanje kukuqhagamshela izixhobo zomsindo kwifowuni yethu ye-Android. Okwangoku sibona ukuba njani i-headphone jack iyanyamalala kwiifowuni ezininzi. Isizathu kukuba uninzi lwabasebenzisi ngoku babheja ekusebenziseni ii-headphone eziqhagamshela kwifowuni yethu ngeBluetooth. Uncedo loku kukungabikho kweentambo. Inika inkululeko kunye nentuthuzelo enkulu kumsebenzisi ngamaxesha onke.
Ukongeza, kwiimeko ezininzi kukho ukungqamanisa okungcono phakathi kwezixhobo, kuluncedo xa kusenziwa iifowuni. Ayisetyenziswanga kuphela kwii-headphone, kuba sibona ukuba kunokwenzeka njani Sebenzisa abalawuli bezinye izinto zokudambisa Enkosi ngeBluetooth. Ivumela ngendlela elula yokuqhagamshela kwifowuni yethu ye-Android. Kwakhona, ukungabikho kweentambo sesona sibonelelo saso siphambili.
Nokuba kwezinye iimeko sinako jonga inqanaba lebhetri usebenzisa iBluetooth, siyazi ke ukuba kungakanani okuseleyo ukuze sizilayishe kwakhona.
Kwiminyaka eyadlulayo, abantu abaninzi babheja ekufakeleni inkqubo engenazandla ezimotweni zabo. Ke xa sifumana umnxeba, bekungeyomfuneko ukusebenzisa ifowuni, kodwa besinokuyifumana ngaphandle kokubamba isixhobo, Enkosi kubukho beBluetooth. Enye indlela yokuphepha ukuphazamiseka emva kwevili. Lo ngumsebenzi osenokwenzeka nanamhlanje, ukuze kunganyanzelekanga ukuba sibambe ifowuni, enkosi kwiBluetooth. Nangona imisebenzi emitsha ifikile.
Kuba sibona ukuba abasebenzisi bayisebenzisa njani le teknoloji ukuya mamela umculo kwifowuni yakho, kodwa usebenzise izipikha zemoto. Ke banokwenza uluhlu lwabo lokudlala kwifowuni yabo, kwiiapps ezinje ngeSpotify, emva koko ubamamele emotweni. Kuyenzeka ukuba ubone izaziso ezivela kwifowuni emotweni ngenxa yale teknoloji.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Yintoni esinokuyisebenzisa ngeBluetooth kwifowuni yethu ye-Android
Ungakusebenzisa njani ukuthayipha kwelizwi kuGoogle kwifowuni yethu ye-Android